Global Voices teny Malagasy » Myanmar: Tsy Noraharahian’ny Praiminisitra Thailandey ve i Aung San Suu Kyi? · Global Voices teny Malagasy » Print
Myanmar: Tsy Noraharahian'ny Praiminisitra Thailandey ve i Aung San Suu Kyi?
Voadika ny 16 Oktobra 2011 15:43 GMT 1	 · Mpanoratra Chan Myae Khine Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Thailandy, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika
Nitsidika an'i Myanmar tamin'ny herinandro teo ny praiminisitra Thailandey Yingluck Shinawatra, izany nahalasa saina ny nitsidihany an'i Nay Pyi Taw toerana onenan'ny manampahefana ao Myanmar ankehitriny fa tsy nandalovany kosa ny tao Yangon, renivohitr'i Myanmar taloha.
Wai Myo Chit namela fanehoan-kevitra  ao amin'ny takelaka facebook ao amin'ny The Irrawaddy (Kinova Birmana)  [my]:
Mino aho fa tonga hifampiraharaha ny politikam-panondranam-bary ataon'ny governemantan'i Myanmar izy. Nampanantena ny tantsaha Thailandey izy hampakatra ny vidin'ny vary izy – indroa avo heny noho ny vidiny eny an-tsena amin'izao fotoana izao – nandritra ny fifidianana. Angamba hanamarina fa tsy hanimba ny drafitra efa napetrany ny politikam-panondranam-barin'ny fitondrana ao Myanmar, nanolotra ‘politikam-pifanakalozana’ hamalifaliana ireo miaramilantsika olomanga jamba izy. Na hahomby na tsia ny drafitra napetrany dia hiakatra ny vidin'ny vary eto Myanmar ! Miala tsiny amin'ireo vahoaka mahantra aho raha tsy maintsy hividy vary mihalafo izy ireo noho ny fiantraikan'izy ity! Fa angamba tsy azo idifiana io satria manana mpandraharaha sy mpandrafitra politika mahay ny firenentsika.
Yingluck Shinawatra nandritra ny valandresaka tao Bangkok, Thailand. Saripika Alexander Widding, copyright Demotix (27/06/2011).
Lasa saina ny sasany hoe nahoana moa i Yingluck tsy naneho fahalianana hitsidika an'i Aung San Suu Kyi, olomalaza manerantany mpiaro ny demokrasia avy ao Myanmar. Nainglwin niresaka  [my] izany ao amin'ny vohikalan'ny Eleven Media.
nahoana izy no tsy nitsidika an'i Aung San Suu Kyi? Tsy zavadehibe aminy ve izany ny olontsika mpitarika vahoaka? Tokony hanaja ny mpitarika antsika izy.
Indro koa i Yingluck fa nitsidika an'Atoa Zaw Zaw izay Filohan'ny Federasiona Fandaka Baolina ao Myanmar. Naneho  [my] ny fahadisoam-panantenany momba ity fitsidihana ity ao amin'ny Irrawaddy News Blog  [my] ny olona iray tsy nitonona anarana.
Fa angaha i Zaw2[Zaw Zaw] minisitra sa inona ny toerana tazoniny amin'izao fotoana izao? Io vinanton'i Thein Htun ao amin'ny Pepsi io angaha lasa mitana andraikitra ambony ao amin'ny lazaina ho governemanta vaovao? Nahoana io Praiminisitra Thailandey io no mitsidika azy? Mpinamana angaha ireo sa mifaninona? Nahoana io Praiminisitra Thailandey io no tsy nihaona tamin'i Daw A.S.S.K. [Aung San Suu Kyi]? Moa ve i Zaw2 lehibe kokoa noho ny mpitarika ny vahoaka? Tsy tokony hanao izao izy, RATSY LOATRA.
Olo-malazan ny demokrasia eran-tany, Aung San Suu Kyi
Etsy ankilan'izany, misy ny olom-pirenen'i Myanmar sasantsasany miarahaba azy tongasoa ao Myanmar. Oonayoo nanome [my] ny heviny momba ny vaovao tamin'ny filazana hoe “Hitsidika an'i Myanmar i Yingluck Shinawatra” ao amin'ny Eleven Media  [my] ary mitovy hevitra aminy ny mpamaky sasantsasany.
Eny ary. Aza mihaona amin'i Nenitoa Suu [Aung San Suu Kyi]. Tsy maniry azy ho sahirana/tafiditra amin'ny zavatra rehetra tsy ao anatin'ny fahefany aho. Na izany aza, mihaino sy mitehaka amin'ny dingana vitan'ny Filoha tao ho ao aho.
Nilaza ny fihetseham-pony momba ny fitsidihan'i Yingluck any ihany koa i icecoolcandy@gmail.com .
Andao arahabaina tonga soa ny Praiminisitr'i Thailandy vehivavy voalohany indrindra. Enga anie hiresaka ry zareo ary hiezaka ho amin'ny tombontsoan'ny firenena roa tonta.
MK nanambara ny fihetseham-pony momba ny Buzz hitan'i Google ihany koa.
Nahoana no matotra dia matotra tamin'ny tsy nitsidihana an'i Daw Aung San Suu Kyi ny olona? Inona no hafahafa amin'izany? Nisy mpitondra ao amin'ny faritra nitsidika azy tao Myanmar va?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/10/16/23786/
 The Irrawaddy (Kinova Birmana): http://www.facebook.com/pages/The-Irrawaddy-Burmese-Version/121507374560090
 Irrawaddy News Blog: http://www.irrawaddyblog.com/
 Eleven Media: http://www.news-eleven.com/